Nkwado nka na ụzụ - Wuhan Golden Laser Co., Ltd.
Igwe eji egbutu laser
Igwe eji egbutu tube laser
Metal mpempe akwụkwọ Laser Cutting Machine
Igwe eji egbutu eriri eriri laser dị elu
Efere na Tube Laser Cutting Machine
Igwe eji egbutu eriri laser nkenke
Ngwaọrụ & Mkpochapu Mbelata Laser Iron
Igwe eji weld laser
Ngwa ụlọ ọrụ
Ngwa Ngwa igwe
Igwe eji egbutu ọkpọkọ akpaaka
Igwe na-egbutu laser dị elu
Igwe eji egbutu eriri Laser agbachiri
Otu Tebụl Fiber Laser Cutting Machine
Tube na Plate Laser Cutting Machine
Linear moto Fiber Laser Cutting Machine
Igwe eji egbutu Laser Robotic
Igwe ịgbado ọkụ laser
Pipe & tube Laser ịcha sample
Nlereanya ịcha akwa mpempe akwụkwọ laser
3D Robot Laser ịcha samples
Ihe nlele nke ịgbado ọkụ laser
Budata katalọgụ igwe Laser
Golden laser ọkachamara oru nkwado
Iji hụ na lezie na izu okè ọrụ, anyị na-bụghị naanị nwere zuru okè tupu ire, ahịa, na mgbe-sales ọrụ usoro, anyị na-eduzi mbara management na-esonụ ebe:
Nke mbụ, njikwa faịlụ ndị ahịa ụda
1. Onye ọ bụla na-azụ ahịa nwere faịlụ nke ya na usoro nhazi ozi na-ahụ maka ọrụ mgbasa ozi zuru ụwa ọnụ nke laser ọla edo, ya mere ọ nwere ike hụ na nkwalite ngwanrọ na oge;
2. A na-edekọ ọrụ ọ bụla ọrụ (mmezi, nletaghachi, nyocha afọ ojuju ndị ahịa wdg) n'ụzọ zuru ezu ma nwee ike ịjụ ya na nyochaa n'oge ọ bụla. Na-agụkọ ndekọ mmezi nke akụrụngwa ndị ahịa wee nye ndụmọdụ ezi uche dị na ya maka ndị ọrụ.
Nke abuo, siri ike teknuzu otu njikwa
1. Onye ọ bụla mgbe-sales ọrụ pesonel nke ọlaedo laser nwere a mahadum ma ọ bụ n'elu, na onye ọ bụla mgbe-sales ọrụ pesonel agbanweela ogologo oge esịtidem ọzụzụ na gafere anyị technology ntule usoro tupu e gbaara na-arụ ọrụ.
2. Mmasị nke ndị ahịa na-abụkarị ndị mbụ, ọ bụkwa ọrụ na-enweghị atụ nke ilekọta na ịkwanyere onye ahịa ọ bụla ùgwù. Anyị na-ekwe nkwa na site na nnabata nke mkpesa na ọrụ saịtị, arịrịọ ọ bụla sitere n'aka ndị ahịa ga-akwụ ụgwọ zuru oke site na laser ọla edo.
3. The Golden Laser ọrụ center ga site n'oge ruo n'oge mgbe-sales ọrụ pesonel maka teknuzu ọzụzụ, melite oru ọmụma na melite ọrụ nkà.
4. Iji hụ na ọganihu na-aga n'ihu nke ọrụ ndị ahịa, anyị eguzobewokwa usoro asọmpi na usoro nchekwa talent maka ịlanarị ndị kachasị mma na ndị nwere nkà, iji hụ na ndị ọrụ nwere ike ịnweta ọrụ na-eju afọ.
Nke ato, njikwa omume oru
1. The ụlọ ọrụ eguzobewo a n'otu koodu omume na ntule ibiere iji hụ na ọrụ usoro a na-etozu na ọrụ usoro na ọrụ na-professionally haziri. Na àgwà nke ọrụ kpatara onye ọzọ na-ebelata ma zere.
2. Ụlọ ọrụ ahụ eguzobewo usoro nlekọta ọrụ dị iche iche. A ga-amanye ntaramahụhụ siri ike na ndị na-emebi ụkpụrụ omume ọkachamara na ụkpụrụ ọrụ.
Nke anọ, njikwa ọwa ozi ọma
1. Ahịa nwere ike ikwurịta okwu na anyị site na dị iche iche ọwa dị ka iji telifon, fax, akwụkwọ ozi, E-mail, na website ozi.
2. Ebe ọrụ nlekọta ndị ahịa laser ọla edo na-elebara ọwa ndị dị n'elu anya ozugbo. A ga-enyeghachi ndụmọdụ onye ahịa, mkpesa na ihe ndị ọzọ chọrọ n'ime obere oge, ma gbalịsie ike ịkwalite afọ ojuju ndị ahịa.
Iji mma na-eje ozi niile ọrụ, na ka ọrụ ego na laser ngwá ngwaahịa mma na-echegbu onwe-free, ọlaedo laser ga-enye ọrụ na mma mgbe-sales ọrụ.
Anyị eguzobela usoro nhazi ozi na-arụ ọrụ zuru ụwa ọnụ ma nwee 400-969-9920 mgbe-ahịa ahịa na-anabata ajụjụ ndị ahịa, mkpesa na nrụzi chọrọ, na soro ndị ahịa 24 awa kwa ụbọchị. Ndị ahịa anyị nwere ike ịnụ ụtọ ọrụ ndị a:
1. Site ụbọchị ịzụrụ, enwe free software upgrades maka ndụ.
2. Mgbe igwe bịarutere, ndị ọrụ nka anyị ga-anọkwa na saịtị iji nye ntinye oge mbụ, inye ọrụ na ọzụzụ teknụzụ maka ndị ọrụ, iji hụ na ndị ahịa nwere ike iji nkà rụọ ọrụ ngwa ngwa. Mgbe ndị ahịa bịanyere aka n'akwụkwọ ma kwenye, ọzụzụ ahụ nwere ike mezue;
3. Mgbe emechara nrụnye na ọzụzụ igwe ọhụrụ maka ụbọchị 2-3, ụlọ ọrụ ahịa ahịa Laser Laser ga-akpọghachi ndị ahịa. Oku azụ na-agụnye akụkụ ndị a:
a) Awụnyere na arụkwaghị ọrụ n'ebe ahụ, afọ ojuju gị na ngwa ahụ?
b) Ma onye ahịa ahụ ejirila usoro arụ ọrụ yana ma ọ nwere ike ịrụ ọrụ n'onwe ya, olee enyemaka dị mkpa?
c) Ị nwere afọ ojuju na àgwà ọrụ nke onye ọrụ ọzụzụ?
d) Onye injinia na-ere ahịa ọ na-agwa onye ahịa mgbe ụlọ ahịa ahịa na-akpọ 400-969-9920?
4. Dị ka ọnọdụ nlọghachi, Ọ bụrụ na enwere nsogbu ọ bụla, ụlọ ọrụ ndị ahịa ga-agwa onye ọrụ ọrụ teknụzụ ndị ahịa ma ọ bụ onye na-azụ ọzụzụ iji mee ihe iji dozie. Ọ bụrụ na enweghị ike idozi ya, anyị ga-enye nzaghachi "akwụkwọ ozi kọntaktị ọrụ" na nyocha teknụzụ dị mkpa na ngalaba mmepe iji nyere aka dozie. Mgbe emechara, ụlọ ọrụ ndị ahịa ga-alaghachikwute ndị ahịa.
5. Iji jirichaa uru nke ndị ahịa na-akwalite na-aga n'ihu mma nke Golden Laser ọrụ, onye ọ bụla ahịa ga-enweta ihe karịrị ugboro atọ na-akpọ azụ, nke bụ:
a) Ụbọchị atọ ka emechara ọzụzụ nrụnye igwe ọhụrụ;
b) Mgbe ọnwa atọ gachara ọzụzụ nrụnye igwe ọhụrụ;
c) Arịrịọ ndị ahịa maka ịrụzi ma ọ bụ ọrụ ire ere;
d) Nleta nletaghachi maka otu ụdị igwe na ịchọ nkwalite;
6. Golden Laser Service Center ekwentị 400-969-9920 free ọrụ oku ga-anabata ndị ahịa ajụjụ, mkpesa na mmezi chọrọ, na ndị ahịa ọrụ center ezigara mgbe-sales engineer maka na saịtị Ndozi. Anyị na-ekwe nkwa na ndị ahịa dị n'ime 300 km nke ụlọ ọrụ laser ọla edo, ndị injinia na-ere ahịa ga-abụ ọrụ na nlekọta saịtị n'ime awa 24 nke ịnata mkpesa; ndị ahịa dị kilomita 300 site na ebe a na-ere ahịa mgbe a na-ere ahịa, ndị injinia na-ere ahịa ga-anabata mkpesa n'ime awa 72 na ọrụ saịtị na nlekọta; maka ndị ahịa mba ọzọ anyị ga-azaghachi n'ime awa 10, rụọ ọrụ nrụzi n'ime awa 72.
Mkpa mgbe emechara ọrụ ugbu a!
Biko nye igwe usoro Mba mgbe ị zitere anyị email maka ọrụ a!
WUHAN ọlaedo laser CO., LTD.
Ọkachamara gị ndị na-emepụta fiber Laser ịcha igwe na China, ndị na-ege ntị n'uche gị, na-enyocha ịcha ọla gị na ihe ịgbado ọkụ igwe chọrọ, meziwanye nrụpụta gị. Ziga anyị ajụjụ gị, anyị ga-enye gị a feasiable eriri laser ọnwụ igwe ngwọta gị nkọwa ụlọ ọrụ.
Metal efere na tube Laser Cutting Machine
Robotic Ogwe aka 3D Laser Cutting Ma ịgbado ọkụ Machine
Akụkụ ndị ahịa
metal ngwá ụlọ
Ngwa ọrụ ugbo
Golden Laser ụlọ NO.3-3 Shiqiao 1st ụzọ, Houhu Street, Jiangnan District, Wuhan, Hubei, China
Nwebiisinka © 2005-2021 Wuhan Golden Laser Co., Ltd. Ikike niile echekwabara